3 ụzọ undelete Files na iPhone
Olee otú undelete Files na iPhone
Mgbe ụfọdụ mgbe ị na nga ezumike ma ọ bụ nweta nkwalite gị iPhone, o nwere ike ugboelu ma ọ bụ accidently hichapụ ihe niile faịlụ. Na mgbe ọ na-eme ka ụmụ gị dị nnọọ ihichapụ ụfọdụ ngwa ma ọ bụ ederede ozi, ọbụna na kọntaktị na gị iPhone mgbe egwu na-akpọ gị iPhone. Mgbe ọ bụla a na-eme, atụla nkụda mmụọ. Ị nwere ike undelete ndị a faịlụ na gị iPhone. Lelee ọmụma.
Gị iPhone na dijitalụ USB;
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ụwa mbụ data mgbake software maka iPhone. Ọ bụ a desktọọpụ ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji ya undelete kọntaktị, ozi ederede, foto, ndetu, kalenda, et. na gị iPhone. Ọ na-enye 3 ụdịdị ka undelete faịlụ na iPhone:
Mode 1: undelete faịlụ ozugbo na iPhone
Mode 2: undelete faịlụ site na iTunes ndabere ọ bụrụ na ị kwadoo ndị a faịlụ na iTunes
Mode 3: undelete faịlụ site na iCloud ndabere ndabere ọ bụrụ na ị kwadoo ndị a faịlụ ka iCloud
iPhone Data Recovery - undelete Files na iPhone
Undelete iPhone photos, ederede ozi, kọntaktị, ndetu, kalenda, na ndị ọzọ;
3 ụdịdị dị ka undelete faịlụ site na iPhone: on iPhone, si iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere;
Mfe iji: jikọọ iPhone> ike iṅomi iPhone> undelete faịlụ ndị ahọrọ
Akwado iPhone: iPhone 6s (gbakwunyere), 6 (gbakwunyere), 5s, iPhone 5c, iPhone 4s, na ndị ọzọ >>
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ ihe omume-achọpụta rụọ gị iPhone ozugbo.
Nzọụkwụ 2 iṅomi maka ehichapụ faịlụ
Pịa "Malite iṅomi" ka a usoro ike iṅomi gị iPhone maka ehichapụ faịlụ. N'elu nke usoro ihe omume, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Naanị gosipụta ehichapụ ihe". Swipe nhọrọ NA.
Nzọụkwụ 3 undelete faịlụ na iPhone
Ọ pụrụ iri a nkeji ole na ole rụchaa usoro a. Ọ na-adabere ego nke gị ehichapụ faịlụ. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ niile ehichapụ faịlụ na-ota n'ime udi. Ị nwere ike pịa ekpe sidebar kwekọrọ ekwekọ ihe ka lelee gị faịlụ. Họrọ ehichapụ faịlụ na pịa Naghachi ka undelete ha.
Mode 2: undelete faịlụ site na iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1 Download nri iTunes ndabere faịlụ
Mgbe launching Wondershare Dr.Fone maka iOS, pịa "naputa site na iTunes ndabere File". Na mgbe ahụ niile iTunes ndabere faịlụ ga-egosipụta. Họrọ onye na e dere ihe faịlụ na ị na-ehichapụ na gị iPhone ibudata.
Nzọụkwụ 2 wepụ ehichapụ faịlụ site na iTunes ndabere
Mgbe nbudata iTunes ndabere faịlụ, ka Wondershare Dr.Fone maka iOS wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Mgbe e mesịrị ka ị pụrụ ịhụ niile faịlụ na-ota n'ime udi. Chọta ehichapụ faịlụ na pịa Naghachi ka undelete ha.
Mode 3: undelete faịlụ site na iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1 Download iCloud ndabere faịlụ
Launch Wondershare Dr.Fone maka iOS na pịa nhọrọ "naputa site na iCloud ndabere File" n'elu nke usoro ihe omume. Abanye na na gị iCloud akaụntụ. Nke a na usoro mgbe anakọta ozi nkeonwe gị, ma ka ị download iCloud ndabere faịlụ. Na-ahọrọ nri iCloud ndabere faịlụ ibudata.
Nzọụkwụ 2 undelete faịlụ site na iCloud ndabere
Pịa na "iṅomi" button ka usoro ihe omume wepụ iCloud ndabere faịlụ. Mgbe e mesịrị, i nwere ike ịhụ ehichapụ faịlụ na gị iPhone. Họrọ chọrọ ndị na pịa Naghachi ka undelete faịlụ site na iPhone.
Olee otú Naghachi ehichapụ Ndi ana-akpo si Motorola Droid Razr
Okosobode White Apple ezie upgrading ka iOS 9?
iPhone Njikọ Nsogbu? Nweta ya mere na sekọnd
Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka iPhone
Ịhụnanya Ozi maka enyi nwanyị, enyi nwoke, nwunye ya, na Di
> Resource> iPhone> Olee otú iji undelete Files na iPhone